Binta Toure Ndoye anosiya vatungamiri veOragroup nemigumisiro yakakura - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » upfumi Binta Toure Ndoye anosiya vatungamiri veOragroup nemigumisiro yakakwira - JeuneAfrique.com
Binta Toure Ndoye anosiya vatungamiri veOragroup nemigumisiro yakakwira - JeuneAfrique.com
Oragroup inozivisa kufambira mberi kwakasimba kwegore re2018, panguva yekuuya kwaFerdinand Ngon Kemoum kuti abudirire Binta Touré Ndoye mumutungamiri mukuru.
Ichitevera musangano wayo webhodhi, boka rebasa reAfrica rebhangi Oragroup rakasimbisa kuwedzera kwekuita kwegore rezvemari ye2018. Inoratidza bhajiro rezvese pa 2 171 Bhiliyoni CFA (3,7 bhiriyoni), kuwedzera kwe21% pamusoro pegore rapfuura.
Mutengi deposits rose rezvebonde Orabank totaled 1 mabhiriyoni 462 CFA mafranc, uye kushanda nechikwereti 1 mabhiriyoni 255 CFA mafranc, kuwedzera dzazvinogara 24 16% uye%. Vose, boka ndokuisa mambure rwezvemabhengi Mari mabhiriyoni 126,77 CFA mafranc (mamiriyoni 221, + 17%) uye Consolidated mambure mari kusvikira 36 29,77% mabhiriyoni CFA mafranc (51,9 mamiriyoni).
>>> VERENGA - Oragroup inomutsa 57 biliyoni F CFA nokuda kwekupinda kwayo kune Abidjan Stock Exchange
"Izvi zvinowedzera kukura kwehutano zvinotsigira hurongwa hwedu hwekufambisa hwakarongedzwa boka rekushandurwa, kuendeswa kwechirongwa cheOrabank, kusunganidzwa kwemabasa edu uye kugadzirisa kwekambani yedu ", anotsanangura Binta Toure Ndoye, mukuru mukuru weboka kubva 2016.
Yaikuru IPO yeBVRM
2018 gore rino aizivikanwa kubudirira ruzhinji pfupiro waakazvitengesa (OPV) vakazvinyoresa kuti 100%, amusimudze pamisika yemari romunharaunda mabhiriyoni 56,92 CFA mafranc, kusanganisira mupiro dzokuwedzera bhiriyoni 25 CFAF pachake mari. Ichi inobudirira oparesheni zvakakonzera dzokushandura musi 4 100 CFA chiito Oragroup musoro kuti Regional Stock Exchange (BRVM), kuti April 16 2019.
Ichi ndicho chiziviso chikuru kubva pakatanga kwe BRVM mu1998. Pan-African investor Emerging Capital Partners inoramba iri chikwereti chinoshandiswa pane inodarika 50% yezvikamu, asi 20% yeguta rakanyorwa pane BRVM.
>>> VERENGA - [2018 iri pamatengesi-4 / 6] - MuAbidjan, Oragroup inobvumira BRVM kuisa breakage
The Orabank samambure pamwe subsidiaries munyika gumi (Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Gabon, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Chad, Senegal, Chad uye Togo), uye boka vakawana muna May 2018 kuti Bloomfield's share, A long-term investment investment notes and A2 short-term.
Muhofisi kubvira muna July 2016 semutungamiri mukuru mushure mekuve mutevedzeri mukuru maneja kubva munaSeptember 2015, Binta Toure Ndoye akasiya basa revatungamiri. "Zvechokwadi gore re2018 rakatsigira Oragroup mukukurira kwayo kwakasimba, ndinonzwa basa rakapedzwa," akadaro.
Vincent Le Guennou, Sachigaro weBhodi yeOragroup uye Co-CEOEmerging Capital Partners, mushure mokuzivisa kuziviswa kwaFerdinand Ngon Kemoum kuhofisi yeGeneral Manager kubva muna 1er June, mushure memusangano mukuru weboka.
Ferdinand ng Kemoum aiva mutevedzeri maneja mukuru Oragroup October 2009 September 2015 wozoita Emerging Capital Partners, zvaakanga akaoneka kutora nzvimbo yake itsva. "Ferdinand Ngon Kemoum anounza zvose zvivimbiso zvekuenderera mberi uye ruzivo rweboka kutungamira peji idzva muupenyu hweOragroup," anodaro Vincent Le Guennou.
Cimenterie: Nigerian Ibrahim Iddi Ango anosangana neNigeria makuru - JeuneAfrique.com
SABC, rutivi rweCameroon rweChrisel Group, ichaparadzira 15 mabhiriyoni FCFA kune vashandi vayo vachishandisa mukana we 2018
Tonga paMunhu City
Makore 75 mushure meD-Day, ndege dzinotora kuHondo Yenyika II "Isati yaonekwa pamberi" yekuyeuka - New York Times
Golden Boot anokunda Aubameyang anoramba achigutsikana mushure mekugadzirisa kune rimwe divi rakanakisisa renyika - VIDEO
Jihadist mungozi: Benin, Togo neGhana panguva yekuunganidza vanhu vakawanda - JeuneAfrique.com